GENESISY 19.30-38	F. 5 | Fitandremana Ankadifotsy
GENESISY 19.30-38	F. 5
Tsy roa aman-tany loatra ny fahalotoan’ny fitondran-tena tao Sodoma sy Gomora. Tsinjo teo amin’ny fiainan’i Lota sy ny zanany ny akon’izany.
Tsy misy tsy meloka.
1°) Lota noho ny fahamamoany. Tsy nijoro amin’ny maha-ray, tokony nandà ny tsy hisotro toa izao na nisotro fa nanana ny onony. Toetra nanjaka be tao Sodoma sy Gomora ny fahamamoana, tsy manamarina an’i Lota izany. Meloka izy eo anatrehan’Andriamanitra.
Fampitandremana. « Ary aza ho mamon-divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka hofenoina ny Fanahy, » (Efesiana 5:18). Nanary lamba tahaka an’i Noa (Genesisy 9:21), mivembena (Isaia 24:20), miraingiraingy (Isaia 19:14). Raha fehezina, izay mamo “tampona” dia tsy tompon’ny tenany.
2°) Ireo zanany roa vavy noho ny fahavetavetana. Nomamoany ny rainy ary ny tena mahavoa fady dia ny fahasahiana nandry taminy ?(32-35). Nanjaka be tao Sodoma sy Gomora ny fiainana ara-nofo. Tsy manamarina azy ireo izany. Meloka eo anatrehan’Andriamanitra izy ireo.
Tsy nisy finoana mihitsy. Moa tsy i Lota ve no nifidy an’i Ziona noho izy lonaka tsara (Genesisy 13.10-11), koa naninona izy no niala tao? Natahotra ny atsonjay hatao aminy ve sa ny hisian’ny loza indray? Tsy nifikitra am-pinoana tamin’ny fampindram-pon’Andriamanitra izay nampitoetra azy tao izy (18-22).
Nihevitra izy ireo ho irery teto an-tany ka tsy hisy afaka hanambady azy ka ho lany tamingana (31). Moa ve Andriamanitra izay namonjy azy ireo tsy hahay hanome taranaka ho azy mirahavavy?
Firenena roa no naterak’izy ireo: Ny Moabita sy ny Amotita, firenena izay mbola fahavalon’Israely mandrak’androany. Mahonena loatra ny fiafaran’ny fiainan’i Lota sy ny ankohonany !